Sacuudi Carabiya oo joojiyay Xujeydii ka imaan jiray dibadda, si ay sanadkan u xajiyaan - Jowhar Somali news Leader
Home News Sacuudi Carabiya oo joojiyay Xujeydii ka imaan jiray dibadda, si ay sanadkan...
Sacuudi Carabiya oo joojiyay Xujeydii ka imaan jiray dibadda, si ay sanadkan u xajiyaan
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday inay xadiday xajka sanadkan, sababo la xiriira Cudurka safmarka ah ee Coronavirus oo Adduunka oo dhan saameeyay.
War ka soo baxay Wasaaradda Xajka ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay in la joojiyay dadkii xujeyda ahaa ee ka imaan jiray dibadda, balse waxaa loo ogol yahay dadka gudaha Sacuudiga ku sugan ee heysta dhalashada kala duwan inay xajin karaan.
“Waxaa la go’aamiyay in xajka sanadkan la qabto tiro aad u kooban ka qeyb galaan oo leh dhalashooyin kala duwan, gaar ahaan dadka ku sugan gudaha Boqortooyada, ayaa lagu yiri Mas’uul u hadlay Wasaaradda Xajka oo ay soo xiganeysay Wakaalada wararka ee Sacuudiga.
Go’aanka ayaa ku soo aadaya iyadoo kororka kiisaska COVID-19 ee adduunka oo dhan saameeyay, iyadoo la la’yahay tallaal looga hortago, si loo ilaaliyo badqadbka dadka xujeyda ah ee ka imaanaya dibadda.
In ka badan labo milyan oo qof ayaa sanad walba taga magaalada barakeysan ee Makkah, si ay u soo gutaan acmaasha Xajka oo ka mid ah shanta tiir ee Islaamka
Sacuudiga ayaa saameyn dhaqaale wajaheysa sanadkan, maadaama dadka ugu badan ee dibadaha ka imaan jiray ay magaalada Makkah Al-Mukarama u tagi jireen si ay u cumreystaan, ama u soo xajiyaan.